NS Malagasy Archive | NewsMada | Page 979
Par Taratra sur 09/04/2016 Faits Divers, NS Malagasy
Miteraka resabe eny amin’ny fiarahamonina sy amin’ny haino aman-jery ny valanaretin-kibo miseho eto Antananarivo izay noporofoin’ny BMH ny alakamisy teo. “Tsy misy afa-tsy ny fahadiovan’ny sakafo sy ny fitaovana rehetra ampiasaina momba ny sakafo no hahafahana misoroka ny aretin-kibo”, hoy ny dokotera Randria, nitondra ny fanazavana. Mila mailo amin’ny karazana loto na mikraoba tsy ampoizina […]
Fanamboaran-dalana : miteraka fitohanana lavareny
Nanomboka tamin’ity herinandro ity ny fanamboarana ireo ampahan-dalana tena nahitana fahasimbana be eto Antananarivo. Mandritra ny andro, fotoana mahabetsaka ny mpivezivezy no hanamboarana izany. Vokany, vao amin’ny 6 ora maraina, efa raikitra ny fitohanan’ny fiara. Tsy misava io fitohanana mivaivay io raha tsy amin’ny 8 ora alina. Betsaka ireo taxi-be misafidy ny mody aloha mba […]
Mahatsiaro ho sahirana ireo mpivarotra marobe miasa ao amin’ny Golden Center satria mbola mikatona hatramin’izao ny toeram-piasan’izy ireo. Manaitra ny sain’ny mpitondra izy ireo fa mamelona olona marobe izany. Betsaka ireo efa tojo fahasahiranana amin’ny fiainana andavanandro vokatry ny fikatonana. Miangavy ny tomponandraikitra mahefa eto Antananarivo mba hanokatra indray ny toeram-pivarotana 400 ao amin’ny […]
Ny Asako rahampitso : manampy amin’ny fisafidianana « serie » ho an’ny mpianatra
Manampy ny mpianatra ao amin’ny kilasy 2nde hisafidy ny sokajy (A-C-D) rehefa hiakatra amin’ny kilasy 1ère ny fisian’ny tetikasa Ny asako rahampitso, araka ny fanazavan’ny mpiandraikitra ny tetikasa ao amin’ny Rotary Ainga, omaly teny Anosy. Hanomboka amin’ny alatsinainy ny hetsika ka kilasy 2nde mahatratra 99 amin’ny lycée tantanin’ny fanjakana valo eto an-dRenivohitra. Hiantefa amin’ny mpianatra […]
Par Taratra sur 09/04/2016 En Bref, NS Malagasy
Nanomboka nizara ny karatra famantarana ny mahamatihanina ho an’ireo mpivarotra ao amin’ny tsenan’Andravoahangy ny kaominina Antananarivo. Tanjona ny hanavahana ireo tena mpampiasa tsena sy mpandoa hetra amin’ny kaominina. Nahafahan’ny tompon’andraikitry ny sampandraharahan’ny tsena ao amin’ny kaominina nanasokajy ireo mpivarotra, arakaraka ny entana amidiny ihany koa izany fizarana karatra izany. Manomboka tazana eny an-tsena ny karazana […]
Association 6.7 one : hampandroso ny secteur 67 ha Nord Ouest
Te hanova ny fomba fijerin’ny mponina eto Antananarivo momba ny fokontany 67 ha ny tanora ao 67 ha Avaratra Andrefana secteur 1. Nitsangana ny fikambanana 6.7 one ka nampahafantarina, omaly, ny fijoroany. Tanjona ny hanatsarana ny tanàna sy hitondra fampandrosoana ao anatin’ny secteur misy azy ireo. « Haverina ny hasin’ny tanàna ka fomba hahatongavana amin’izany ny […]
Par Taratra sur 09/04/2016 NS Malagasy, NS-Politique
Hotanterahina, anio etsy amin’ny lapa maitso Anosikely, ny fametrahana samboady ireo loholona voafidy, ho an’ny faritanin’Antananarivo. Homarihina amin’ny lanonana tsotra arahin’ny lahatenin’ny filohan’ny Antenimierandoholona izany. Hotanterahina ny 2 mey kosa ny fametrahana amin’ny fomba ofisialy ireo loholona ho an’ny faritanin’i Mahajanga sy Toamasina ary Fianarantsoa. Tsy mbola voafaritra mazava kosa ny fotoana hanaovana izany, ho […]
Tsy afaka ny hangina intsony. Nivoaka amin’ny fanginany ary naneho hevitra momba azy ireo ny mpikambana eo anivon’ny kongresin’ny Tetezamita (CT), omaly. Nambaran’izy ireo fa tsy mbola nandray ireo zo sy tombontsoany samihafa izy ireo. « Efa voasoratra anaty lalàna izany zo sy tombontsoanay izany ka angatahinay amin’ny tompon’andraikitra amin’izao fotoana izao na ireo ho […]
Analankininina Toamasina : jeneraly sy Kolonely nifamely totohondry
Io indray! Nifamely totohondry ny manamboninahitra roa lahy (Jeneraly sy Kolonely), omaly tao Analankininina Hopitalibe Toamasina, omaly… Miaramila eo Analankininina Hopitalibe sy kaomandim-paritany miaramila fahatelo ireto nifamely totohondry ireto, araka ny fampitam-baovao avy any an-toerana. Raha ny fitantaran’ny kolonely voan’ny totohondrin’ilay jeneraly, nilaza izy fa tsy namaly mihitsy fa ity jeneraly ity no nanao befiavy […]
Nibahana ny arabe ary nandoro kodiarana ny mpianatra mipetraka eny amin’ny Cité an’ny oniversite omaly hariva, nanomboka tamin’ny 6 ora teo, teny Ambohipo. Tapaka tanteraka ny arabe ary sahirana ny olona teny an-toerana. Tonga teny Ankatso sy Ambohipo ny Emmo/Reg nandrava ireo mpianatra. Nirefotra mihitsy ny grenady mandatsa-dranomaso tamin’izany. Araka ny fanazavan’ireo mpianatra, mitaky ny […]
Alatsinainy Ambazaha : mpangalatra omby tratran’ny zandary
Hatolotra ny fampanoavana anio ny lehilahy iray voarohirohy ho nangalatra omby tany Alatsinainy Ambazaha, ny alarobia teo. Afakomaly izy no saron’ny zandary ao amin’ny borigadin’Ampitatafika nandritra ny fanarahan-dia. Araka ny fanazavan’ny zandary, omby iray no nangalarin’ity mpangalatra ity ary novonoiny teny an-tranony eny Ambohijafy Ampitatafika. Tratran’ny zandary sy ny fokonolona tao an-tranony ilay omby efa […]
Jery taratra… herinandro : mitombo an-dalana ny olana
“Izy no anontanio.” Samy nilaza an’izay tamin’ny mpanao gazety na ny filohan’ny Repoblika na ny praiminisitra ny amin’ny fifandraisan’izy ireo. Niteny aza iry voalohany hoe: “Aleo hifampiresaka izahay.” Ho tampoka ny fanovana governemanta. Nitsotra ity farany fa tsy hametra-pialana, manoloana ny hoe misy fanerena azy amin’izany. Nampiaka-peo ny depiote sasany: misy tsy manaiky ny hanalana […]
Ny isavorovoroan-kikatsoana… hilantoana
Par Taratra sur 09/04/2016 Edito Taratra, NS Malagasy
Resabe mampifanditra ny amin’ny fifandraisan’ny samy fahefana mpanatanteraka: ny filohan’ny Repoblika sy ny praiminisitra. Manga ny lanitra? Izao iaraha-mahita izao ny tohiny: nametra-pialana ny praiminisitra, araka ny fanambaran’ny fiadidiana ny Repoblika. Nilaza ny praiminisitra fa hanao izany amin’ny fotoana mahamety azy. Na ahoana na ahoana, saro-toerana ny hoe fahamarinan-toerana sy fitoniana politika. Mandra-pahoviana ny toy […]
Par Taratra sur 09/04/2016 La Une, NS Malagasy, NS-Politique
Miseho ny disadisan’ny samy mpitondra. Nambaran’ny eo anivon’ny fiadidiana ny Repoblika, omaly teny Iavoloha, fa nametra-pialana, omaly ny praiminisitra Ravelonarivo sy ny governemanta. Namaly izany ny tenany, ny hariva. « Tsy mbola nametra-pialana aho saingy hanao izany amin’ny fotoana maha mety azy », hoy izy teny Mahazoarivo. “Ekena ny fametraha-pialana atolotry ny Praiminisitra Ravelonarivo Jean amin’ny anarany […]
Resaky ny mpitsimpona akotry : diso lavitra ny fotoana amin-drafahendrena
Par Les Nouvelles sur 08/04/2016 Elucubrations, NS Malagasy
Raha misy fahavalo mametraka sakantsakana eo amin’ny ezaka (izay faniriana fotsiny hatramin’izao) mitana ny laharana voalohany ny kolikoly. Ketraka anefa raha maheno ny fametrahan’ny Mpitsara ny tanjona fanafoanana ny fanjakazakan’io fanao fanetribe io. Amin’ny taona 2025 ny fotoana, izay fetra izay no fanamby mba hamongorana ny kolikoly. Aoka re! Sivy taona ambonin’izay efa nisy, ampy […]
Par Les Nouvelles sur 08/04/2016 Faits Divers, NS Malagasy
Belle prise de la Brigade régionale de la police nationale à Fénérive-Est. A l’issue d’une série d’opérations destinées à endiguer le vol et la commercialisation de vanille verte, les policiers ont réussi à déjouer plusieurs tentatives. Presque chaque jour, des plaintes dénonçant des vols de vanille verte sont adressées aux services de police ou dans […]
Lomano – Afrique 2016 : hiroso amin’ny fitsapana farany ny federasiona
Par Taratra sur 08/04/2016 NS Malagasy, NS-Sports
Mazava. Raha tontosa soa aman-tsara iny ny fiadiana ny tompondakan’i Madagasikara taranja lomano, teo amin’ny dobo 25 m, mbola hisy fifaninanana hatrehin’ireo mpilomano malagasy hatrany ato ho ato. Raha ny fanazavan’ny tompon’andraikitra iray eo anivon’ny federasiona malagasy (FMN), ho fanomanana ny fiatrehana ny fiadiana ny tompondakan’i Afrika, ny volana oktobra izao, any Bloemfontein, Afrika Atsimo, […]
Rallye – «Slalom Yacco» : hatao eny Ivato ny dingana faharoa
Hotontosaina, eny amin’ny “circuit TMF” eny Ivato, ny asabotsy 9 sy ny alahady 10 avrily ho avy izao, ny dingana faharoa, amin’ny fiadiana ny ho tompondakan’i Madagasiakara eo amin’ny “slalom”. Fihaonana karakarain’ny kliobao Asacm sy ny Yacco. Mirefy 1, 500 km izy io ary hihodinana indray mandeha ihany ho an’ireo mpifaninana rehetra. Araka ny fandaharam-potoana, […]
Kitra – «Ligue des champions d’Europe» : tratry ny tsy nampoizina ny Real de Madrid
Nitranga ny tsy nampoizina, teo amin’ny lalao ampahefa-dalana mandroso amin’ny fiadiana ny ho tompondakan’i Eoropa “Ligue des champions”, taranja baolina kitra. Lavo mantsy ny andrarezina. Resin’ny Wolfsburg, tamin’ny isa mazava 2 noho 0 ny Real de Madrid. Fihaonana notanterahina tao amin’ny kianja Volkswagen Arena, ny alarobia lasa teo. Tsy nisy nanam-po mihitsy ity faharesena mihoa-pampana […]
Taorian’ny fahombiazana tamin’ny fifaninanana “Coupe du Président” eo amin’ny taranja basikety, mitohy hatrany ny fanohanan’ny filoham-pirenena ny fanatanjahantena malagasy. Efa manangasanga indray mantsy ny fananganana fotodrafitrasa. Ho fampivelarana ny tanora eo amin’ny tontolon’ny fanabeazana sy eo amin’ny tontolon’ny fanatanjahantena ary ho fampiroboroboana ny taranja basikety, maro ireo tetikasa kasain’ny federasiona malagasy (FMBB) hotanterahina, manomboka […]
« Précédent 1 … 977 978 979 980 981 … 1 067 Suivant »